मलाई ‘वेश्या’ बनाउने पुरुषको उपनाम के ? |
प्रकाशित मिति :2016-12-31 10:00:15
यो समाजमा म जुठो हो भने मेरा जुठा शरीर भोग गर्ने पुरुष कसरी चोखो हुनसक्छ ? म ‘वेश्या’ भएँ भने मलाइ वेश्या बनाउने यो पुरुषको उपनाम के?
सानैमा विहे गरेकी उनले एउटी छोरीलाई होस्टेलमा राखेकी हुनाले काठमाडौंमा डेरामा एक्लै बस्न थालेको पनि दुईचार वर्ष नै भइसकेको थियो। उनका बारेमा छिमेकीको आ–आफ्नो अनुमान थियो।
कोही भन्थे यसको श्रीमान अमेरिका तिर छ रे, कोही भन्थे श्रीमानले छाडेको वर्षाैं भइसकेको छ रे, अनि कोही भन्थे यसकी छोरीलाई समेत थाहा छैन रे त्यसको बाउ को हो भनेर, तर सबैको अनुमानमात्र थियो वास्तविक कुरा स्वयं इच्छालाई मात्र थाहा थियो।
उनले छोरीको जन्मदिन पारेर मलाइ पनि निम्ता गरेकी थिइन्। दिनभरी छोरीलाई फन पार्क र केही सपिङ गराएर पुन होस्टेल छाडेर हामी दुवै जना उनको कोठामा पुग्यौं। म घर जान्छु भन्दा उनले आज पिउने मुड छ एक्लै के पिउनु बस न भनेर कर गरेपछि मैले नाइ भन्नै सकिनँ।
उनको फोनमा बेला बेलामा नयाँ नयाँ नम्वरबाट फोन आइ नै रहेको थियो।
तीजमा मालिक्नी माइत गएकी थिइन। घरमा म एक्लै थिएँ। घरमा मालिक आउने कुनै खवर थिएन। राति सुतिसकेकी थिएँ। टेलिफोनको घण्टी बजेकोआवाजले मेरो आँखा खुले।
ढोका खोल भन्नुभयो, मैले ढोका खोलें र भान्सा कोठामा सुत्न गएँ।
उनी मातेका थिए। के खोज्नु भयो भनेर सोधें
म छक्क परे‌ं कहिल्यै त्यस्तो केही नसोचेको मान्छे एक्कासी! म अलि पर सरें उ झन नजिक आयो।
मैले विन्ती गरे मलाइ छाडी देउ भनेर तर मेरो चित्कार सुनेन। उसले मेरो कलिला अंगलाइ भोग गर्‍यो। मलाइ सही नसक्नु पीडा हँुदा समेत
केही गर्न सकिनँ। बिहान उठ्दा उ घरमा थिएन। म पहिलो चोटी लुटिएँ,
धेरै रोएँ, अरु केही विकल्प थिएन म सँग।
मैले सहन नसकेर हप्तामा काम गर्न आउने दिदीलाई सवै कुरा भनें। उसले तिमी यहाँवाट भागेर मेरोमा आउ राम्रो काम खोजी दिउँला भनेपछि म त्यो घर बाट भागेकी थिएँ।
अर्की दिदीको घरमा केही महिना बसेपछि गार्मेन्टमा काम गर्न थालें।
उ निकै माया गर्थ्याे। हामीले विवाह पनि गर्‍यौं।
हाम्रो पहिलो सन्तानको रुपमा छोरी जन्मेकी थिइ। श्रीमान पनि ठेक्का पट्टाको काम गर्ने गर्थे। कोठामा सवै सामान जोडेका थियौँ। छोरी जन्मेको केही महिना पछि उ मलाइ र छोरीलाई छाडेर बेपत्ता भयो।
छोरी च्यापेर सिन्धुपाल्चोक पुगेर उसको फोटो देखाउँदै धेरैलाइ सोधें, तर कसैले चिनेनन्।
सबैले उल्टै मलाइ नै दोषी सावित गरे ।
म निराश हुदै फर्किएँ। कोठामा भएको खानेकुरा सकिएको थियो।
म कहाँ जाने र के गर्ने भनेर सोच्न नै सकेकी थिइन। धेरै पटक मर्न कोसिस नि गरें, तर काखको छोरीको मायाले मर्न दिएन।
यदी एउटी महिला उसको घर बिर्गाने भनेर सोच्ने मानसिक रोगीहरूले कहिल्यै सोचेनन् होला पुरुषले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सनु हुँदैन भनेर। आफूसँग भएको कुरा नै सदुपयोग गर्ने हो।
बौद्धिक क्षमता भएका महिलाहरू पनि दिनभरी अफिसमा बसेर आफ्नो क्षमता बेच्दछन् उनीहरू ‘वेश्या’ हुँदैनन्, तर शरीर बच्ने किन वेेश्या ? म यो पेशामा बाध्यतामा लागें, तर म भएको ठाउँमा धेरै शोखले आउँछन्, वास्तविक गल्ती कस्ले गरेको हो? यदी म यो पेशा छाडे